के पुटिनलाई क्यान्सर भएको हो ? - Kantipath
के पुटिनलाई क्यान्सर भएको हो ?
बेलायती खबर पत्रिका ‘द सन’ का अनुसार रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन चाँडै क्यान्सरको शल्यक्रियाबाट गुज्रदैछन् । ‘द सन’ ले क्रेमलिन अर्थात् रुसी सरकार भित्रका व्यक्तिहरूलाई यसको स्रोतको रूपमा उद्धृत गरेको छ।
त्यससंगै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अस्थायी रूपमा देशको सुरक्षा परिषद्का सचिव निकोलाई पात्रुसेभलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर क्यान्सरको शल्यक्रिया गराउन सक्ने अमेरिकी समाचार संस्था न्युयोर्क पोस्टले दाबी गरेको छ । चिकित्सकहरूले पुटिनलाई शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बताएको रूसी पूर्वविदेशी गुप्तचर सेवाका लेफ्टिनेन्ट जनरलद्वारा सञ्चालित टेलिग्राम च्यानललाई उद्धृत गर्दै सो पत्रिकाले लेखेको छ ।
पात्रुसेभको नाम आमजनता अगाडीअज्ञात भएपनि उनी युक्रेनको आक्रमणमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका व्यक्तित्व हुन्। वास्तवमा, द सनका अनुसार युक्रेन नाजीहरूले भरिएको छ र त्यसलाई खुट्टामा ल्याउनु आवश्यक छ भनी पुटिनलाई विश्वस्त गराउने युद्ध सुरु गर्नमा उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।
पुटिनको स्वास्थ्य समस्या सार्वजनिक भएको यो पहिलो पटक भने होइन। यी रिपोर्टहरू डेढ वर्षअघि प्रकाशित भएको दाबी गरिन्छ। त्यतिबेला, ‘जनरल एसभीआर’ एक रूसी मिडिया आउटलेटले राष्ट्रपतिको शल्यक्रिया हुनेछ भनेर रिपोर्ट गरेको थियो।
रिपोर्टहरूले संकेत गर्दछ कि पुटिनको रोग गम्भीर छैन, यद्यपि डाक्टरहरूले प्रगति भइरहेको र भविष्यमा जटिलताहरूबाट बच्न कारबाही आवश्यक पर्ने बताएका हुन्।